Sida loo xaqiijiyo iibsiyada Google Play adoo adeegsanaya sawirka faraha | Androidsis
Sida loo xaqiijiyo iibsiyadaada Google Play farahaaga
Markaan ku iibsanno codsi Google Play, waa inaan geli lambarka sirta ah ee koontadeena, hab ah si loo xaqiijiyo in la yiri iibsiga, si loo muujiyo inay annaga tahay. Waa tallaabo nabadgelyo oo la fahmi karo, in kasta oo ay hoos u dhigayso nidaamka lacag-bixinta. Sidaa darteed, isticmaaleyaal badan ayaa raadinaya fursado kale oo arrintan la xiriira.
Warka fiicani waa inay jiraan. Tan iyo markii Google Play aan haysanno suurtagalnimada ku xaqiiji iibsashada barnaamijka noocaas ah farahaaga, hab wanaagsan oo looga faa'iideysto jiritaanka dareeraha faraha ee taleefanka markasta. Waxaan kuu sheegeynaa sida shaqadan hoos ugu shaqeyso.
Marka hore waa inaan fur Google Play Store taleefankeena Android. Marka aan gudaha u galno dukaanka, waa inaan soo bandhignaa liiskiisa dhinaceeda, oo aan ku sameyno adigoo gujinaya astaanta saddexda xariijimo ee jiifka ah. Kadib, markii liiskaas la furay, waxaan aadeynaa dejinta koontada.
Goobahaan waxaan ka helnaa ikhtiyaarka Xaqiijinta Biometric, taas oo ah ta ina danaysa. Sida caadiga ah badiyaa waa la joojiyaa, markaa waanu dhaqaajinaa. Markii aan sidan sameyneyno, waxa caadiga ah ayaa ah in nala weydiin doono lambarka sirta ah ee koontada, si loo muujiyo inaan nahay kuwa isbadalkan sameynaya.
Xulashadaan hoostiisa waxaan sidoo kale kaheleynaa xulashada weydiiso xaqiijin si aad wax uga iibsato Google Play. Waanu ku habeyn karnaa inta jeer ee aan dooneyno in nala weydiiyo, si ay ugu habboonaato adeegsigayaga dukaanka arjiga iyo wax ka iibsiga aan ka sameyno dukaanka.
Sidan oo kale, waxa aan aasaasno ayaa ah in markaan wax ku iibsaneyno Google Play, waxaa naloo weydiin doonaa aqoonsigan, taas oo kiiskan noqon doonta sawirka faraha, halkii aad ka gali lahayd lambarka sirta ah markasta oo aan soo iibsano barnaamij ama ciyaar. Habka u oggolaanaya hawshu inay noqoto mid dhakhso badan markasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loo xaqiijiyo iibsiyadaada Google Play farahaaga
MIUI 11 xasilloon ayaa imanaya Xiaomi Mi MIX 2, Mi 9 SE iyo shan nooc oo kale